Multicast မိတ်ဆက် - Part 1 - BIM Trainings
Dec 10, 2015 | Posted by	Aung Naing Moe | Uncategorized	|
ကျွန်တော်တို့ Network အကြောင်း စလေ့လာတော့
4.anycast ဆိုပြီး လေ့လာကြရပါတယ်။
အဲဒီထဲကမှ CCNA , CCNP level လောက်ထိ unicast တို့၊ broadcast တို့အကြောင်း ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောကြ၊ ဆွေးနွေးကြပေမယ့်၊ Multicast ကတော့ အမေ့ခံဘ၀နဲ့ ကျန်နေခဲ့ပါ တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Multicast application တွေကို အသုံးပြုတဲ့ environment နဲ့ဝေးကွာနေခြင်း၊ Network ပညာရပ်ကို လေ့လာတဲ့အခါ အခြေခံလောက်နဲ့ ရပ်ပြီး ရှေ့ဆက်ပြီး မလေ့လာခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါ တယ်။ multicast application တွေ မသုံးတဲ့အတွက် multicast အတွက် အာရုံစိုက်စရာမလိုတော့ မလေ့လာ ဖြစ်တော့ပါဘူး။ အသုံးမပြုသည့်တိုင်အောင် အခြေခံလောက်နဲ့ ရပ်မနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ သီအိုရီအနေနဲ့ လေလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရှေ့ဆက်မလေ့ာလဖြစ်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ Multicast ဆိုတာ one to group trammision လောက်နဲ့ပဲ အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Stock market တွက်ကျယ်လာတဲ့တစ်နေ့ Multicast application အသုံးတွင်ကျယ်လာပါ လိမ့်မယ်။ဘဏ်တွေ၊ sotck ဒိုင်တွေ၊ stock ပွဲစားတွေ၊ stock ငွေကြေးဈေးကွက် ကျယ်ပြန့်လာတဲ့အခါ Multicast ဟာ အရေးပါလာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီတော့ Multicast အကြောင်း သိဖို့လိုလာပါပြီ။
ဒါကြောင့် Multicast မိတ်ဆက်ဆိုပြီး ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
Multicast ဆိုတာ data trammision လုပ်တဲ့အခါ source တစ်ခုကနေ destination group ကို တပြိုင်နက် တည်း ပို့လွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ one to group transmission လို့ အလွယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Unicast = one to one transmission
Broadcast = one to all transmission
Anycast = one to nearest transmission
Muliticast = one to group transmission ဆိုပြီး လွယ်ကူစွားမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
Multicast ကိုသုံးရခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့-
၁) data ပို့မယ့် server ရဲ့ workload ကို လျှော့ချဖို့၊
၂) Network bandwidth resource လျှော့ချဖို့
၃) router တွေက packet တွေ forward လုပ်တဲ့အခါ processing နည်းနိုင်သမျှ နည်းဖို့၊
၄) လက်ခံမယ့် host အနေနဲ့လည်း processing နည်းနိုင်သမျှ နည်းဖိုိ့ ဖြစ်ပါတယ်။
Multicast ကိုသာ မသုံးခဲ့ဘူးဆိုရင် server ရဲ့ workload က များလွန်းပြီး server ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခုကို ထမ်းနေရသလိုဖြစ်နေပြီး၊ multicast လည်း သုံးလိုက်ရော server ရဲ့ workload ဟာ သိသိသာသာ ကျဆင်း သွားပါတယ်။
Why not just use unicast?
အကယ်၍ Multicast ကိုမသုံးဘဲ unicast ကိုသာသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်-
၁) sender အနေနဲ့ receiver ဆယ်ခုရှိရင် packet ဆယ်ခု generate လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
၂) sender အနေနဲ့ receiver အားလုံးရဲ့ address ကိုသိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၃) router အနေနဲ့လည်း packet တစ်ခုကို process တစ်ခုအနေနဲ့ သီးသန့်စီခွဲပြီး အလုပ်,လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
၄) receiver များရင်များသလောက် bandwidth ကုန်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် same information တစ်ခုကိုပဲ အားလုံးပို့ချင်တဲ့အခါ unicast က အဆင်မပြေတော့ပဲ multicast ကပိုပြီး efficient ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကပုံကို လေ့လာကြည့်ပါ။ unicast ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် ဖြစ်လာတဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်တွေကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Unicast ကိုသုံးမယ့်အစား multicast ကိုသုံးလိုက်တဲ့အတွက် ရရှိလာတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို အောက်ကပုံကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။
Why not just use Broadcast?
အကယ်၍ Multicast ကိုမသုံးဘဲ broadcast ကိုသုံးခဲ့ရင်-
၁) Broadcast ဆိုတဲ့သဘောက packet တစ်ခုကို လက်ခံရရှိတဲ့ interface ကလွဲလို့ same broadcast ထဲမှာရှိတဲ့ ကျန်တဲ့ interface အားလုံးကို forward လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂) ကျန်တဲ့ Host အားလုံးဟာ ရောက်လာတဲ့ broadcast ကို လက်ခံချင်သည်ဖြစ်စေ၊ လက်မခံချင်သည်ဖြစ် စေ၊ processing ကိစ္စမှာ ပါဝင်ရပါတယ်။ ရှောင်လွှဲလို့မရတော့ပါဘူး။
၃) အဲဒီတော့ traffic ကို လက်မခံချင်တဲ့ receiver တွေအတွက် network resource ဟာ မလိုအပ်ပဲ သုံးစွဲနေရပါတယ်။
ဒါကြောင့် broadcast ကိုသုံးခြင်းကလည်း အဆင်မပြေပဲ၊ multicast ကို သုံးစွဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ကပုံကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ broadcast ကိုသုံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မကောာင်းကျိုးတွေကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
How Multicast Saves Resource?
Multicast ကိုသုံးခြင်းကြောင့် resource ကို ဘယ်လိုမျိုး save လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့-
၁) Source အနေနဲ့ traffic ကိုလက်ခံချင်တဲ့သူတွေဆီကိုပဲ single data အနေနဲ့ ပို့လွှတ်ပါတယ်။
၂) Source အနေနဲ့ ဘယ်သူတွေက receiver တွေလည်းဆိုတာ သိဖို့မလိုပါဘူး။
၃) Router အနေနဲ့လည်း receiver အားလုံးအတွက် packet ကို forward လုပ်ဖို့ decision ချတဲ့အခါမှာ single forwarding အနေနဲ့ပဲ ပို့လွှတ်ပါတယ်။
၄) interface တစ်ခုမှာ packet တစ်ခုပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် bandwidth သုံးစွဲမှုဟာ အများကြီး သက်သာသွားပါ တယ်။ ဒါတွေဟာ Multicast ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။
Multicast ဟာ UDP ကိုသုံးပါတယ်။ Multicast ကိုသုံးပြီး Data ကို ပို့လွှတ်တဲ့အခါ UDP ကို မဖြစ်မနေ သုံးရ ပါတယ်။ UDP ဆိုတာကလည်း connectionless ဖြစ်တဲ့အတွက်-
၁) delivery လုပ်တဲ့အခါမှာ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် TCP လိုမျိုါ် ack မရှိပါဘူး။ ပို့လွှတ်တဲ့အချက်လက်တွေ ရောက်လား၊ မရောက်လားဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။
၂) congestion ဖြစ်လား မဖြစ်လားလဲ မသိနိုင်ဘူး။
၃) packet duplicate ဖြစ်နိုင်ခြေလည်း ရှိပါတယ်။
၄) TCP လို sequence number မပါတဲ့အတွက် packet ရှေ့နောက် အစီစဉ်မကျလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ Muliticast ရဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
How Multicast Works?
အထက်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Multicast Application တစ်ခုက source ဖြစ်ပြီး၊ destination က Group ဖြစ်ပါတယ်။
၁) အဲဒီတော့ source application တစ်ခုက UDP multicast traffic တွေကို group destination ဆီကို ပို့လွှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၂) Data ကို လက်ခံချင်တဲ့ receiver တွေက router တွေဆီကို singal ပို့လွှတ်ပြီး Group ကို လာ join ရပါတယ်။
၃) router တွေက sender ကနေ receiver ဆီသွားရာ လမ်းမှာ loop မဖြစ်ဖို့ loop free ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ရပါတယ်။
၄) receiver မရှိတဲ့ network portion တွေက traffic ကို လက်မခံပါဘူး။
Multicast Use Case Example
ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ Multicast ကို အသုံးများလဲဆိုတော့-
Multimedia အပိုင်းမှာဆို IP TV, Video conferencing, VoIP Music စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
Data Distribution အပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Data center replication တွေမှာ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
Real time application တွေမှာဆိုရင်တော့ stock market တွေမှာ အသုံးများပါတယ်။
ကြှနျတျောတို့ Network အကွောငျး စလလေ့ာတော့
4.anycast ဆိုပွီး လလေ့ာကွရပါတယျ။
အဲဒီထဲကမှ CCNA , CCNP level လောကျထိ unicast တို့၊ broadcast တို့အကွောငျး ထပျခါတလဲလဲ ပွောကွ၊ ဆှေးနှေးကွပမေယျ့၊ Multicast ကတော့ အမခေံ့ဘဝနဲ့ ကနျြနခေဲ့ပါ တယျ။ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ Multicast application တှကေို အသုံးပွုတဲ့ environment နဲ့ဝေးကှာနခွေငျး၊ Network ပညာရပျကို လလေ့ာတဲ့အခါ အခွခေံလောကျနဲ့ ရပျပွီး ရှဆေ့ကျပွီး မလလေ့ာခွငျးတို့ကွောငျ့ ဖွဈပါ တယျ။ multicast application တှေ မသုံးတဲ့အတှကျ multicast အတှကျ အာရုံစိုကျစရာမလိုတော့ မလလေ့ာ ဖွဈတော့ပါဘူး။ အသုံးမပွုသညျ့တိုငျအောငျ အခွခေံလောကျနဲ့ ရပျမနတေဲ့သူတှအေတှကျတော့ သီအိုရီအနနေဲ့ လလောဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ရှဆေ့ကျမလော့လဖွဈတဲ့သူတှေ အတှကျတော့ Multicast ဆိုတာ one to group trammision လောကျနဲ့ပဲ အဆုံးသတျသှားပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ Stock market တှကျကယျြလာတဲ့တဈနေ့ Multicast application အသုံးတှငျကယျြလာပါ လိမျ့မယျ။ဘဏျတှေ၊ sotck ဒိုငျတှေ၊ stock ပှဲစားတှေ၊ stock ငှကွေေးဈေးကှကျ ကယျြပွနျ့လာတဲ့အခါ Multicast ဟာ အရေးပါလာပါလိမျ့မယျ။အဲဒီတော့ Multicast အကွောငျး သိဖို့လိုလာပါပွီ။
ဒါကွောငျ့ Multicast မိတျဆကျဆိုပွီး ဆှေးနှေးခငျြပါတယျ။
Multicast ဆိုတာ data trammision လုပျတဲ့အခါ source တဈခုကနေ destination group ကို တပွိုငျနကျ တညျး ပို့လှတျတာဖွဈပါတယျ။ one to group transmission လို့ အလှယျမှတျနိုငျပါတယျ။
Muliticast = one to group transmission ဆိုပွီး လှယျကူစှားမှတျသားနိုငျပါတယျ။
Multicast ကိုသုံးရခွငျးရဲ့ အဓိကရညျရှယျခကျြကတော့-
၁) data ပို့မယျ့ server ရဲ့ workload ကို လြှော့ခဖြို့၊
၂) Network bandwidth resource လြှော့ခဖြို့
၃) router တှကေ packet တှေ forward လုပျတဲ့အခါ processing နညျးနိုငျသမြှ နညျးဖို့၊
၄) လကျခံမယျ့ host အနနေဲ့လညျး processing နညျးနိုငျသမြှ နညျးဖို့ ဖွဈပါတယျ။
Multicast ကိုသာ မသုံးခဲ့ဘူးဆိုရငျ server ရဲ့ workload က မြားလှနျးပွီး server ဝနျထုပျဝနျပိုးတဈခုကို ထမျးနရေသလိုဖွဈနပွေီး၊ multicast လညျး သုံးလိုကျရော server ရဲ့ workload ဟာ သိသိသာသာ ကဆြငျး သှားပါတယျ။
အကယျ၍ Multicast ကိုမသုံးဘဲ unicast ကိုသာသုံးခဲ့မယျဆိုရငျ-
၁) sender အနနေဲ့ receiver ဆယျခုရှိရငျ packet ဆယျခု generate လုပျရပါလိမျ့မယျ။
၂) sender အနနေဲ့ receiver အားလုံးရဲ့ address ကိုသိဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။
၃) router အနနေဲ့လညျး packet တဈခုကို process တဈခုအနနေဲ့ သီးသနျ့စီခှဲပွီး အလုပျ,လုပျရပါလိမျ့မယျ။
၄) receiver မြားရငျမြားသလောကျ bandwidth ကုနျပါလိမျ့မယျ။
ဒါကွောငျ့ same information တဈခုကိုပဲ အားလုံးပို့ခငျြတဲ့အခါ unicast က အဆငျမပွတေော့ပဲ multicast ကပိုပွီး efficient ဖွဈပါတယျ။ အောကျကပုံကို လလေ့ာကွညျ့ပါ။ unicast ကိုသုံးထားတဲ့အတှကျ ဖွဈလာတဲ့ မကောငျးတဲ့အခကျြတှကေို တှပေ့ါလိမျ့မယျ။
Unicast ကိုသုံးမယျ့အစား multicast ကိုသုံးလိုကျတဲ့အတှကျ ရရှိလာတဲ့ ကောငျးကြိုးတှကေို အောကျကပုံကို ကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ သိနိုငျပါတယျ။
အကယျ၍ Multicast ကိုမသုံးဘဲ broadcast ကိုသုံးခဲ့ရငျ-
၁) Broadcast ဆိုတဲ့သဘောက packet တဈခုကို လကျခံရရှိတဲ့ interface ကလှဲလို့ same broadcast ထဲမှာရှိတဲ့ ကနျြတဲ့ interface အားလုံးကို forward လုပျလိုကျမှာဖွဈပါတယျ။
၂) ကနျြတဲ့ Host အားလုံးဟာ ရောကျလာတဲ့ broadcast ကို လကျခံခငျြသညျဖွဈစေ၊ လကျမခံခငျြသညျဖွဈ စေ၊ processing ကိစ်စမှာ ပါဝငျရပါတယျ။ ရှောငျလှဲလို့မရတော့ပါဘူး။
၃) အဲဒီတော့ traffic ကို လကျမခံခငျြတဲ့ receiver တှအေတှကျ network resource ဟာ မလိုအပျပဲ သုံးစှဲနရေပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ broadcast ကိုသုံးခွငျးကလညျး အဆငျမပွပေဲ၊ multicast ကို သုံးစှဲရခွငျးဖွဈပါတယျ။
အောကျကပုံကိုလလေ့ာကွညျ့ပါ။ broadcast ကိုသုံးခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာတဲ့ မကောငျးကြိုးတှကေို တှပေ့ါလိမျ့မယျ။
Multicast ကိုသုံးခွငျးကွောငျ့ resource ကို ဘယျလိုမြိုး save လုပျနိုငျလဲဆိုတော့-
၁) Source အနနေဲ့ traffic ကိုလကျခံခငျြတဲ့သူတှဆေီကိုပဲ single data အနနေဲ့ ပို့လှတျပါတယျ။
၂) Source အနနေဲ့ ဘယျသူတှကေ receiver တှလေညျးဆိုတာ သိဖို့မလိုပါဘူး။
၃) Router အနနေဲ့လညျး receiver အားလုံးအတှကျ packet ကို forward လုပျဖို့ decision ခတြဲ့အခါမှာ single forwarding အနနေဲ့ပဲ ပို့လှတျပါတယျ။
၄) interface တဈခုမှာ packet တဈခုပဲ ဖွဈတဲ့အတှကျ bandwidth သုံးစှဲမှုဟာ အမြားကွီး သကျသာသှားပါ တယျ။ ဒါတှဟော Multicast ရဲ့ ကောငျးကြိုးတှဖွေဈပါတယျ။
Multicast ဟာ UDP ကိုသုံးပါတယျ။ Multicast ကိုသုံးပွီး Data ကို ပို့လှတျတဲ့အခါ UDP ကို မဖွဈမနေ သုံးရ ပါတယျ။ UDP ဆိုတာကလညျး connectionless ဖွဈတဲ့အတှကျ-
၁) delivery လုပျတဲ့အခါမှာ ဝနျထုပျဝနျပိုးနညျးနိုငျသမြှနညျးအောငျ ဆောငျရှကျပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ TCP လိုမျြိုါ ack မရှိပါဘူး။ ပို့လှတျတဲ့အခကျြလကျတှေ ရောကျလား၊ မရောကျလားဆိုတာ မသိနိုငျပါဘူး။
၂) congestion ဖွဈလား မဖွဈလားလဲ မသိနိုငျဘူး။
၃) packet duplicate ဖွဈနိုငျခွလေညျး ရှိပါတယျ။
၄) TCP လို sequence number မပါတဲ့အတှကျ packet ရှနေ့ောကျ အစီစဉျမကလြညျး ဖွဈတတျပါတယျ။
ဒါတှကေတော့ Muliticast ရဲ့ မကောငျးတဲ့အခကျြတှဖွေဈပါတယျ။
အထကျမှာ ဆှေးနှေးခဲ့တဲ့အတိုငျးပဲ Multicast Application တဈခုက source ဖွဈပွီး၊ destination က Group ဖွဈပါတယျ။
၁) အဲဒီတော့ source application တဈခုက UDP multicast traffic တှကေို group destination ဆီကို ပို့လှတျခွငျးဖွဈပါတယျ။
၂) Data ကို လကျခံခငျြတဲ့ receiver တှကေ router တှဆေီကို singal ပို့လှတျပွီး Group ကို လာ join ရပါတယျ။
၃) router တှကေ sender ကနေ receiver ဆီသှားရာ လမျးမှာ loop မဖွဈဖို့ loop free ဖွဈအောငျ တညျဆောကျရပါတယျ။
၄) receiver မရှိတဲ့ network portion တှကေ traffic ကို လကျမခံပါဘူး။
ဘယျလိုနရောတှမှော Multicast ကို အသုံးမြားလဲဆိုတော့-
Multimedia အပိုငျးမှာဆို IP TV, Video conferencing, VoIP Music စတာတှဖွေဈပါတယျ။
Data Distribution အပိုငျးမှာဆိုရငျတော့ Data center replication တှမှော သုံးလရှေိ့ပါတယျ။
Real time application တှမှောဆိုရငျတော့ stock market တှမှော အသုံးမြားပါတယျ။